UPDATE 2-South Africa issues arrest warrant for Zimbabwe's Grace Mugabe
Updated: 19-12-2018 21:12 IST Created: 19-12-2018 21:12 IST
"I can confirm that a warrant for the arrest of Grace Mugabe was issued last Thursday," police spokesman Vishnu Naidoo said, adding that police were seeking Interpol's help to enforce the warrant.
But Zimababwe's deputy minister for information, Energy Mutodi, told Reuters that Zimbabwe would not extradite her to South Africa as this would be "harassment".
"I believe the government of Zimbabwe will not tolerate any harassment or degrading treatment on the former President Mugabe and his immediate family members," Mutodi said, adding that he would still need to consult with President Emmerson Mnangagwa on the final decision.
She has denied assaulting Engels, saying an "intoxicated and unhinged" Engels attacked her with a knife after the model had gone to see the Mugabes' sons at the hotel in Johannesburg's posh Sandton district.
Mrs Mugabe has retreated from the limelight in Zimbabwe since her husband was ousted. (Reporting by Alexander Winning in Johannesburg and MacDonald Dzirutwe in Harare, Editing by James Macharia and Angus MacSwan)
READ MORE ON : grace mugabe south african rand diplomacy south african open south african airways african cuisine africa south africa flag of south africa bona mugabe robert mugabe zimbabwe vice-president of zimbabwe gold medal model modeling agency standard model african americans african art grace mugabe south africa